पिल्मो राई भाषाको पहिलो गीत « Tuwachung.com
१. मेयर राईको त्यो रेडियो
२. गभर्नरद्वारा मोबाइल बैंकिङमार्फत हलेसीमा ११ हजार १११ भेटी
३. ‘लकडाउन’ले फेसन डिजाइनरको जागिर खोसिएपछि पेन्टिङ
४. गायिका मीना राईलाई घुम्न मन पर्ने ५ ठाउँ
५. नामजस्तै कामलाई माया गर्ने ममता
७. राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बाल्यकाल
८. तेजपत्ता सेवन गर्नेको मधुमेह चट्
९. विदेशीको शव बोकेरै ल्याइने, नेपालीको त्यतै फालिने
१०. खुवालुङ खुल
११. सडकमा कराउँदै तरकारी बेच्ने कलाकारको काठमाडौंमा घर
१२. हलेसी गुफाका भित्ता चिरैचिरा : समितिद्वारा भौगर्भिक अध्ययन तयारी
पिल्मो राई भाषाको पहिलो गीत
छिरिङ श्रीपोस् पिल्मो राई	२०७७ माघ २७, २३:३७
कुनै पनि जातिको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको जननी एवम् पहिचानको स्रोत उद्गम थलो हो । संसारको विभिन्न क्षेत्रमा बसोवास गर्न पुगे पनि उद्गम थलोकै नामबाट परिचित हुने गर्छन् । इतिहासको जरो खोतल्ने आधारभूमि उद्गम थलो नै हो । त्यसो भएकाले प्रत्येक जातिले आफ्नो पितृभूमिप्रति माया दर्शाउने गर्छन् ।
पिल्मोङ राई समुदायको पितृथलोप्रति प्रेम दर्शाउँदै डा. बीबी लोवात्ती पिल्मो राईले गीत रचना गरेका छन् । गीतको नाम रहेको छ ‘निनाम्मा गोछापी’ । गीतले पिल्मोे समुदायको उद्गम थलो देतेल गाउँको इतिहासलाई उजागर गरेको छ ।
पिल्मो राईका पुर्खाहरू एक भाइ देतेल गाउँमै बसोवास गरे । अर्काे भाइ देतेलबाट बसाइँ सरेर हुँगा खोलापारि नाम्लुमा बसोवास गर्न पुगेको गीतले बताउँछ । देतेलका पुर्खाले सातिपुस (मृत्यु संस्कारको पुरोहित) र नाम्लुका पुर्खाले तोस् नोक्छो (तोस् पुजारी) भएको गीतले बताउँछ । यसरी पुर्खासँगै सांस्कृतिक ज्ञान पनि अंशबण्डा हुन गएको गीतले बताउँछ । गीतले नाम्लुबाट पनि बसाइँ सरेर चोचोलुमा बसोवास गर्न पुगेको बताउँछ ।
खप्दुलुका छोरा छाम्पानामले देतेलमा स्थायी बसोवास गरेपछि उनको सन्तानलाई पिल्मो नामकरण गरिएको गीतले बताउँछ । गीतले भाषा, संस्कृति र इतिहास जगेर्ना गरेर पिल्मो राईले आफ्नो अस्तित्व संरक्षण गर्न आह्वान गरेको छ ।
पिल्मो समुदायको मातृभाषा इरिङमा रचना गरिएको पहिलो गीत हो– ‘निनाम्मा गोछापी’ । यो गीतले श्रोताको मन छुनेमात्र गरेको छैन, पहिचान संरक्षणमा अग्रसर हुनुपर्ने सन्देश छरेर पिल्मो परिवारको आत्मबल उच्च बनाएको छ ।
पिल्मोको इतिहास खोज्ने र लेख्ने काम अहिलेसम्म भएको थिएन । यो गीतले श्रोतालाई आफ्नो इतिहास आफैंले खोज्नुपर्छ, भाषा र संस्कृति जगेर्ना गरेर आफ्नो पहिचानको रक्षा गर्न जागृत गरेको छ ।
यो गीत अहिले युट्युबबाट डाउनलोड गरेर मोबाइलबाट मोबाइलमा सारेर व्यापक सुनिँदै छ । अर्थात् लोकप्रिय बन्न पुगेको छ ।
गीतमा सुरिलो स्वर दिएर दिवस पिल्मो, क्षितिज पिल्मो र दिवेक पिल्मोले श्रोताको मन जितेका छन् ।
म्युजिक भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
चलचित्रभन्दा जेठो चलचित्र पत्रकारिता
अहिले हरेक पत्रिकाले कलासँग सम्बन्धित सामग्रीलाई छुट्टै पाना व्यवस्था गरेका छन् । दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन
‘लकडाउन’ले फेसन डिजाइनरको जागिर खोसिएपछि पेन्टिङ
ओखलढुंगा । महेश श्रेष्ठ व्यावसायिक कलाकार होइनन् । सिद्धिचरण नगरपालिका–११ रामबजारका ३१ वर्षीय श्रेष्ठ फेसन
‘मायाको चिनो’ सार्वजनिक
दुर्छिम (खोटाङ) । अदृश्य कला केन्द्रको पाँचौं प्रस्तुति ‘मायाको चिनो’ पूर्वेली लोकजुहारी तुवाचुङ टीभी युट्युब
एक दिनमा पाँच गीत रेकर्ड गर्ने गायिका
‘एक दिनमा ?,’ गायिका जुना प्रसाईंले सुनाइन्, ‘पाँचवटा गीतसम्म रेकर्ड गरेकी छु ।’ एक दिनमा
३५ वर्ष नगरप्रमुख रहेका विश्वविख्यात वैज्ञानिक
ओटोवन ग्वरिके एक प्रसिद्ध भौतिकशास्त्री, इन्जिनियर र दार्शनिक थिए । उनले वायुपम्प आविष्कार गरेका थिए
आमा र ऐना
आमाले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि ऐना हेर्न पाउनुभएको थिएन । ऐनामा आफ्नो अनुहार कस्तो देखिन्छ ?
सडकमा कराउँदै तरकारी बेच्ने कलाकारको काठमाडौंमा घर
एउटा सुन्दर घर बनाउने सपना जोकोहीको हुन्छ । धेरै मान्छे यो सपना पूरा गर्न संघर्षरत